I-Raw Buparlisib (944396-07-0) HPLC =98% | AASraw
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / IBuparlisib (944396-07-0)
SKU: 944396-07-0. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Buparlisib (i-CAS 944396-07-0), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Buparlisib powder ngumlomo, ongenakufumaneka, ngokucacileyo, kunye ne-inhibitor enamandla ye-pan-class I phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) intsapho, kwaye inxaxheba yayo njengommeli we-antiticancer okwangoku uphando.
Buparlisib Abalinganiswa basisiseko
I-molecular Formula: C18H21F3N6O2
Isisindo somzimba: 410.3935496
Melt Point: 645.7 ± 65.0 ° C
Ukusetyenziswa kweBuparlisib (944396-07-0) kumjikelezo we-steroids
I-Buparlisib (944396-07-0), i-pan-class I-phosphotidyinositol-3-kinase (PI3K) inhibitor.
I-Buparlisib iyi-pan-class oral I-phosphotidyinositol-3-kinase (PI3K) inhibitor. Isigaba samanje ndihlola ukuvavanya ukhuseleko, i-pharmacokinetics, kunye nokusebenza kwe-buparlisib kunye ne-capecitabine kwizigulane ezine-metastatic cancer.
② Izigulane kunye neendlela
Izigulane zifumene i-buparlisib kanye imihla ngemihla (uluhlu, i-50 ukuya kwi-100 mg) kwiiveki ze-3 nge-capecitabine kabini imihla ngemihla (u-1000 ukuya ku-1250 mg / m2) kwiiveki ze-2 ezinekhefu ze-1. Ukunyuka kwe-Dose kusetyenziswa isakhiwo somveli "3 + 3" kunye neenkcazo eziqhelekileyo zobunyoyi bezilingo (DLT) kunye neqondo eliphezulu lokunyamezela.
Kwizigulane ze-25 ababhalisile, ii-23 zavandlakanywa kwi-DLT kunye ne-17 zavavanywa ukuphendula. Inqanaba elixhasayo elixhasayo lidibeneyo yi-buparlisib 100 mg imihla ngemihla kunye ne-capecitabine 1000 mg / m2 kabini imihla ngemihla. I-DLTs ibandakanye ibanga le-3 hyperglycemia kunye ne-grade 3 ukudideka. Ibanga eliqhelekileyo le-3 isifo sohudo kunye nokuphakama kwe-aspartate aminotransferase kunye ne-alanine transaminase. Omnye isigulane wabonisa impendulo epheleleyo kwonyango kwaye ezine zineempendulo eziqinisekisiweyo. Kwi-coNts 3 kunye ne-4, apho i-dose ye-Buparlisib (944396-07-0) isoloko ihlala iqhubeka kodwa i-dose capecitabine yanda, ukwanda okwenziwe kwiinkcenkcesho ze-plasma zeplasmisi.
Ukudibanisa i-buparlisib kunye ne-capecitabine kwizigulane ezineesifo somhlaza wesifo se-metastatic ngokuqhelekileyo sibekezelela, kunye nezigulane ezininzi zibonisa iimpendulo ezide. Amazinga angaphantsi angalindelekanga okutshintshwa kwe-PIK3CA (3 ye-17) yabonwa, kwaye kuphela i-2 ye-7 tumors kunye ne-subtyping yayiyi-luminal, okwenza ukuhlolisiswa kwala manqaku angabonakali. Uphando olongezelelweyo lwenxulumano alunangqiqo, kunye ne-pharmacokinetics eyandisiweyo kunye nokuhlalutya ngokulandelelwano ukuze kulungelelanise ngakumbi ukusebenzisana kweziyobisi kunye neziphumo zokuphendula ezichanekileyo.
Ukuguqulwa kwe-phosphatidylinositol i-3-kinase (PI3K) / i-AKT / i-mammalian injongo ye-rapamycin yokuyindlela yokumisela iyona nto ibalulekileyo ekukhuleni nasekusindekeni kwamanqamu amaninzi, kuquka nomhlaza wesifuba. Ukongezelela, ukutshatyalaliswa kwe-PI3K ukubonisa kungabangela ukuchasana namaqela amaninzi anticancer. I-PI3K inhibitors inokuthi isebenze njengonyango lwe-antineoplastic. I-Buparlisib yinto enamandla kakhulu kunye nomlomo othe ngqo kwi-inhibitor ye-pan-class I I-PI3K intsapho. I-Buparlisib igxininisa ngokukodwa itekisi I-PIK3 kwi-PI3K / AKT kinase indlela yokutshintshela ngendlela yokukhuphisana kwe-ATP, oko kukuvimbela ukuveliswa komthunywa wesibini we-phosphatidylinositol (3,4,5) -i-trisphosphate kunye nokusebenza kwe-PI3K indlela yokubonisa. Oku kunokubangela ukuvinjelwa kwe-cell tumor growth and survival in the tumor cell cell. I-Buparlisib okwangoku iphandwayo kwizigulane ezineentlobo ezahlukeneyo zesisu, kuquka nomhlaza wesifuba. I-Buparlisib iye yaqinisekiswa njengegosa elithembisa i-antiticancer, kwaye kwenziwa iinzame ezinkulu ukuphuhlisa. Nangona kunjalo, i-buparlisib monotherapy iye yabangela inzuzo ethobekileyo ngoku. Iziphumo ezivela kwizifundo ezidibanisa i-buparlisib kunye nama-agent anticancer ahlukeneyo-okuthi, unyango lwe-endocrine, unyango lwe-HER2, kunye ne-chemotherapy-lubonise ukuphumelela okungafaniyo kunye nefuthe elikhulu.
Indlela yokuthenga iBuparlisib ukusuka kwi-AASraw
I-LCZ696 powder (936623-90-4)
I-Trestolone Acetate (MENT) ipowder
Stanozolol / Winstrol / powny powder
I-AC 262356 powder
I-Mifepristone powder (84371-65-3)